သင်္ဃန်းကျွန်း ဆေးရုံကို အခြေအနေ ဆိုးသွားစေနိုင် တဲ့ ကူးစက်မှု ဖြစ်ရပ် ( ဒီလိုလူ တွေကြောင့် အစိုးရ က Home Q မပေးတာ ) – Shwe Ba
ကန့် သတ် ထိန်းချုပ် ခြင်း နည်း ဗျူဟာ တခု ထဲ နဲ့ မရတော့ပါဘူး ။ မလိုက်နာရင် အနောက်က ပြစ်ဒဏ် တစ်ခု လိုက်ရမယ်…။သင်္ဃန်းကျွန်း ဆေး ရုံ ဆေးကုသဆောင် မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကိုပြောရ ရင် တစ်ခြား ဌာနတစ်ခု မှာ swab ယူထားတဲ့ လူတယောက် အဖြေမ ရခင် Q ဝင်နေရမယ် ဆိုတာကို Home Q ပဲ နေပါ့မယ် ဆိုပြီး အတင်း လက်မှတ်ထိုး ဆင်းလာတယ် ပြီးတော့ မနေဘဲ သင်္ဃန်းကျွန်း ဆေးရုံ မှာ လူနာ လာစောင့်တယ် ။
လူက မရှိ လို့ မသိလို့ လုပ်တာမျိုး မဟုတ် ပိုက်ဆံရှိ လူတန်းစား သဘောင်္သား သားသားနားနားပုံ (စကားပြောတာ လဲ အချိုးမပြေ ဂျစ်ကန် ကန် နဲ့ ဟု သိရ)ဆေးရုံမှာ ၂ ရက်လောက် ရောဂါဖြန့်ပြီး မှ အမျိုးသားဓတ်ခွဲခန်း က ဖုန်းဆက် လို့ ကျွန်တော် positive ထွက်လို့ပါ ဆိုပြီး အီးအာ စီ ကို သွားပြောသတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်း က swab ယူထားတဲ့ စာရင်းထဲလဲ မပါ အကုန် အလုပ်ရှုပ်ကုန်ရော
အဲ့ နှစ် ရက် အတွင်း ဆေးရုံ မှာ သူထိတွေ့ခဲ့တဲ့ လူနာတွေ လူနာစောင့် တွေ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေ ဆရာဝန်တွေ အကုန်လုံး ကို အားနာမှု မရှိ မိုက်ရိုင်းချက်က ကမ်းကုန်တယ် ။အခု medical က လက်ထောက် ဆရာဝန် တစ်ယောက်ပါ positive ထွက်လာပြီ ။ နိုင်ငံ တော် အနေ နဲ့ ဒီကောင့်ကို ဘာပြစ်ဒဏ်ပေးမှာလဲ ။ ဖေ့ဘုတ်တင်မှ သိကြမှာလား….?
ကနျ့ သတျ ထိနျးခြုပျ ခွငျး နညျး ဗြူဟာ တခု ထဲ နဲ့ မရတော့ပါဘူး ။ မလိုကျနာရငျ အနောကျက ပွဈဒဏျ တဈခု လိုကျရမယျ…။သင်ျဃနျးကြှနျး ဆေး ရုံ ဆေးကုသဆောငျ မှာ ဖွဈသှားတဲ့ အဖွဈအပကျြ ကိုပွောရ ရငျ တဈခွား ဌာနတဈခု မှာ swab ယူထားတဲ့ လူတယောကျ အဖွမေ ရခငျ Q ဝငျနရေမယျ ဆိုတာကို Home Q ပဲ နပေါ့မယျ ဆိုပွီး အတငျး လကျမှတျထိုး ဆငျးလာတယျ ပွီးတော့ မနဘေဲ သင်ျဃနျးကြှနျး ဆေးရုံ မှာ လူနာ လာစောငျ့တယျ ။
လူက မရှိ လို့ မသိလို့ လုပျတာမြိုး မဟုတျ ပိုကျဆံရှိ လူတနျးစား သဘောင်ျသား သားသားနားနားပုံ (စကားပွောတာ လဲ အခြိုးမပွေ ဂဈြကနျ ကနျ နဲ့ ဟု သိရ)ဆေးရုံမှာ ၂ ရကျလောကျ ရောဂါဖွနျ့ပွီး မှ အမြိုးသားဓတျခှဲခနျး က ဖုနျးဆကျ လို့ ကြှနျတျော positive ထှကျလို့ပါ ဆိုပွီး အီးအာ စီ ကို သှားပွောသတဲ့ သင်ျဃနျးကြှနျး က swab ယူထားတဲ့ စာရငျးထဲလဲ မပါ အကုနျ အလုပျရှုပျကုနျရော
အဲ့ နှဈျ ရကျ အတှငျး ဆေးရုံ မှာ သူထိတှခေဲ့တဲ့ လူနာတှေ လူနာစောငျ့ တှေ ရဟနျးရှငျလူ ပွညျသူတှေ ဆရာဝနျတှေ အကုနျလုံး ကို အားနာမှု မရှိ မိုကျရိုငျးခကျြက ကမျးကုနျတယျ ။အခု medical က လကျထောကျ ဆရာဝနျ တဈယောကျပါ positive ထှကျလာပွီ ။ နိုငျငံ တျော အနေ နဲ့ ဒီကောငျ့ကို ဘာပွဈဒဏျပေးမှာလဲ ။ ဖဘေု့တျတငျမှ သိကွမှာလား….?